ဟိုဆေးမှ Miguel | | ယေဘုယျ
ကျနော်တို့နှင့်အတူစာရင်းပြုစုကြပြီ ယူဆချက်အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပျက်မှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၏ရှင်းပြချက်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ဆန္ဒရှိသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အမှန်တကယ်ရောက်ရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အမှန်တရားကိုရောက်ရှိရန်ကြိုးစားရမည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူဆချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အကျဉ်းချုပ်သိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်း၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအကျိုးဆက်များကိုရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ဖြစ်နိုင်သမျှသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုယူဆခြင်း.
ယူဆချက်များသည်ယခင်ကရရှိခဲ့သည့်သတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံသည်၊ ၎င်းသည်သေချာပေါက်မဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့မှထိုအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှန်တကယ်ရှာဖွေရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ရှိသည်။
သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းသို့ပြန်သွားလျှင်အယူအဆ (သို့) တိတိကျကျသိပ္ပံနည်းကျယူဆချက်သည်နိဂုံးချုပ်အားတည်ထောင်ရန်စမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများမှတဆင့်အတည်ပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ္ပံနည်းကျအမှန်တရားရောက်ရှိဖို့ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း.
ဤအယူအဆသည်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ သေချာစေရန်မှာသေချာရန်မလိုပေ၊ သို့သော်သေချာသည်မှာသိပ္ပံနည်းကျအခြေခံအရထောက်ပံ့နိုင်သောအဖြေတစ်ခုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နိဂုံးချုပ်ပြီးသိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းဖြင့်ပြသရန်လိုသည်။
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ သူတို့၏မူလသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ယူဆချက်အမျိုးအစားများဖြစ်သည့်အဓိကအမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှစ်ခုကိုတွေ့နိုင်ပြီး၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူယေဘုယျရှုထောင့်မှယူဆချက်အမျိုးအစားများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ယင်း၏နယ်ပယ်အရသိရသည်အယူအဆပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းင်း၏နယ်ပယ်အပေါ် အခြေခံ၍ ယူဆချက်ရှိသည်။ အထွေထွေယူဆချက်များသည်စနစ်တကျထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောသူများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အနည်းကိန်းဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောအချက်ကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘူယျယူဆချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကိုယေဘုယျရှုထောင့်မှကောက်ချက်ချရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယူဆချက်များရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောယေဘူယျယူဆချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်သိသာသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမရောက်ရှိနိုင်သော်လည်းအများစုကိုသာအာရုံစိုက်သည်။
ယင်း၏မူလအစအပေါ်အခြေခံပြီးအယူအဆအခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလယူဆချက်များနှင့်အညီယူဆချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် inductive hypotheses များသည်ပာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သဘာဝလည်ပတ်မှုပုံမှန်ကိုအာရုံစိုက်သောသူများဖြစ်သည်။ အခြားအယူအဆများမှတဆင့်ရရှိသောဖြတ်တောက်ခြင်းမှရရှိသောနှုတ်ယူပြီးသားများလည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ ဥပမာ - ဒါဝင်၏သီအိုရီများကိုလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကဲ့သို့သောဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်အသုံးပြုသောနှိုင်းယှဉ်ချက်အယူအဆများရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားယူဆချက်များ၏ပျက်ကွက်မှုများကိုဖော်ပြသည့်အထူး ad hoc hypotheses များရှိသည်။
၎င်း၏အတိမ်အနက်ကိုအခြေခံပြီးအယူအဆ။ ၎င်းသည်နက်ရှိုင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထူးခြားသောရှင်းလင်းချက်ကိုရှာဖွေခြင်းမဟုတ်ဘဲဖြစ်ရပ်များ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်ရှင်းလင်းသောရှင်းပြချက်ကိုရှာဖွေရန်ကိုယ်စားပြုသောယူဆချက်များကိုအာရုံစိုက်သောထူးခြားဆန်းကြယ်သောယူဆချက်များရှိသည်။
ယင်း၏သဘာဝအဆင့်ကိုအခြေခံပြီးအယူအဆ။ သဘာဝအဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ လူမှုဗေဒ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ဓာတုစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောယူဆချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
၎င်း၏အုတ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်။ အယူအဆနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံထားသောပင်ကိုယ်မူလယူဆချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ကောင်းမွန်သောကိုက်ညီမှုရှိသော်လည်းသီအိုရီဆိုင်ရာအထောက်အပံ့မရှိသည်။ လက်တွေ့ကျသောအခြေခံမရှိသောသီအိုရီဆိုင်ရာယူဆချက်များ၊ သီအိုရီဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နှင့်ခိုင်လုံသောယူဆချက်များရှိသည်။
ယေဘူယျယူဆချက်များ၏ရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။
သုတေသနအယူအဆ: သုတေသနယူဆချက်များသည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကိန်းရှင်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးသောသူများဖြစ်သည်။ ဤယူဆချက်တွင်တန်ဖိုးများကိုဖော်ပြမည့်အယူအဆများဖြစ်သောတန်ဖိုးများ၏ဖော်ပြချက်အယူအဆများအတွင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ချက် ၄ ခုရှိနိုင်သည်။ လေ့လာရေး, ဤ variable တွေကိုမဆိုအမျိုးမျိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းဆက်စပ်မှုယူဆချက်, အလှည့်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ variable တွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုသောကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအကြားယူဆကွာဟမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်သောသူတို့သည်ဖြစ်ကြောင်းအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှု၏ယူဆချက်သူတို့တည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်ပေမယ့် ဤသဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့တည်ရှိရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုရှင်းပြခြင်းအပြင် variable များအကြားဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုအတည်ပြုသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်နွယ်မှုကိုတည်ထောင်သောယူဆချက်များရှိသည်။
တရားမဝင်သောယူဆချက်များဖြေ။ ။ တရားမဝင်သောယူဆချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုတေသနပြုချက်အချို့မှအတည်ပြုသောအရာတစ်ခုခုကိုငြင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းဆိုခြင်းပြုရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသော variable များအကြားတည်ရှိပြီးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်ဗဟိုပြုသောသူများအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာယူဆချက်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ တရား ၀ င်သည်ဟုယူဆကြသောယူဆချက်များမှပေါ်ထွက်လာသောအခြားကွဲပြားခြားနားသောရှင်းလင်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ယူဆချက်များနှင့်ယူဆချက်များပါ ၀ င်သည့်ယူဆချက်များအကြောင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
စာရင်းအင်းအယူအဆနောက်ဆုံးတွင်ရရှိလာသောအချက်အလက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောစာရင်းအင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုကိုရှာဖွေရန်၊ နောက်ဆုံးတွင်အခြေခံအားဖြင့်သုတေသနယူဆချက်များ၏စာရင်းအင်းသင်္ကေတများ၊ null hypotheses သို့မဟုတ်အခြားယူဆချက်များသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်အတွက်တန်ဖိုးအချို့ကိုယူပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော variable များအကြားရှိတည်ရှိမှုအပေါ်အခြေခံပြီးစာရင်းအင်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ရှာကြံသည့်စာရင်းအင်းဆက်စပ်မှုယူဆချက်များရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ယေဘုယျ » ဤရွေ့ကားယူဆချက်အမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်